တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်မောင်းနှင်(ရုပ်/သံ) - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်မောင်းနှင်(ရုပ်/သံ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် “ကျုလုံ”သည် ၎င်း၏ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်သည့်ပလက်ဖောင်းမှ အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ မောင်းနှင်သွားလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားအာကာသစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာန(CNSA)က စနေနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်တွင် “ကျုလုံ”၏ ပထမဆုံး အောင်မြင်စွာ မောင်းနှင်သွားလာနိုင်မှုသည် တရုတ်နိုင်ငံကို အမေရိကန်ပြီးလျှင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် ဆင်းသက်မောင်းနှင်နိုင်သည့် ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ရရှိသောအချက်အလက်များအရ “ကျုလုံ”သည် ပေကျင်းစံတော်ချိန် စနေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်မြေပြင်ပေါ်သို့ ဘီးချဆင်းသက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း CNSAက ပြောသည်။
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ် (orbiter) ၊ ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ် (lander) နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် (rover) တို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ်(lander)သည် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် (rover)ကို သယ်ဆောင်ပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ်မြောက်ဘက်ခြမ်း Utopia မြေပြန့်တောင်ပိုင်းကို မေ ၁၅ ရက်က ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ (Xinhua)
GLOBALink | China’s first Mars rover drives onto red planet’s surface
China’s first Mars rover, Zhurong, has driven down from its landing platform to the Martian surface, the China National Space Administration (CNSA) announced on Saturday.
China’s Tianwen-1 mission, consisting of an orbiter,alander andarover, was launched on July 23, 2020. The lander carrying the rover touched down in the southern part of Utopia Planitia,avast plain on the northern hemisphere of Mars, on May 15.
ဝါရှင်တန် တိရစ္ဆာန်ရုံတွင် ပြသထားရှိမည့် ပန်ဒါလေး ရှောင်ချီကျီ
ထျန်းကျင်းတွင်ကျင်းပသည့် ၅ ကြိမ်မြောက် World Intelligence Congress အားလေ့လာကြည့်ရှုခြင်း